ICebu, enye inketho yezivakashi ePhilippines | Izindaba Zokuhamba
ICebu, enye inketho yezivakashi ePhilippines
UMariela Carril | | EPhilippines, Iziqondiso
NgoLwesibili sikhulume ngeBoracay, enye yezindawo ezinhle zokuvakasha ePhilippines. Kungumbuso wezokuvakasha wamazwe omhlaba futhi sinikeza lonke ulwazi oludingekayo ukuze sikwazi ukusuka eManila siye kule ndawo enhle yelanga, amabhishi, ulwandle olufudumele nobumnandi.
Kepha uma ubhekisisa ibalazwe lePhilippines uzobona ukuthi nalo likhona Zebu. Isifundazwe esiyisiqhingi esifundeni esiphakathi neVisayas esakhiwe ngesiqhingi esikhulu neziqhingi ezingaphezu kwe-160 ezizungezile. Cebu, inhlokodolobha, Yidolobha elidala kunawo wonke ePhilippines futhi namuhla kungumuzi wesimanje, onamandla futhi othuthuke kakhulu. Futhi uma ungeza kulawo mabhishi aseparadisi ... kuhle, unenye inketho yezivakashi ePhilippines! Uzosho ekugcineni ukuthi ukhetha muphi.
1 ICebu, inhlokodolobha yokuqala yePhilippines
2 Izinto okufanele uzenze eCebu
ICebu, inhlokodolobha yokuqala yePhilippines
Ngaphambi kokufika kwabaseSpain, lezi ziqhingi zazingumbuso olawulwa yinkosana yaseSumatra. AbaseSpain bazofika ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX futhi kusukela lapho umlando wabo uyingxenye yezincwadi zasentshonalanga.
Isiqhingi esikhulu, ICebu, iyisiqhingi esincanyana futhi eside esigijima amakhilomitha ayi-196 ukusuka enyakatho kuye eningizimu futhi endaweni ebanzi kunazo zonke cishe ngamamayela angama-32. Inamagquma nezintaba, yize kungenalutho oluphakeme kakhulu, futhi kukhona okuzungezile amabhishi amahle, izixhobo zamakhorali, ezinye iziqhingi nempilo engaphansi kwamanzi okumangalisayo. Ukukujabulela ngokugcwele kufanele uhambe ngenkathi eyomile, ngaphandle kukaJuni kuya kuDisemba, kanye nenkathi yesiphepho.
Phakathi kukaMashi noMeyi kuyashisa futhi kungafinyelela kalula kuma-36 ºC, kepha ulinganisela ukuthi unyaka wonke i-arc eshisayo iphakathi kuka-24 no-34 ºC. Ngamafuphi, isikhathi esiphansi siphakathi kukaMeyi noJuni naphakathi kukaSepthemba no-Okthoba ngamazinga okushisa aphakathi kuka-25 no-32 andC nezimvula. Isikhathi esiphakeme ngo-Ephreli, ngoMeyi nangoJuni esinokushisa okwengeziwe nemimoya, kodwa imvula encane.
Amanani aphansi, ukuvakasha okuncane nokunikezwa okuningi kokuvakasha okukodwa nokuningi, ilanga eliningi, iqembu elengeziwe nezintengo eziphakeme kowesibili. Kukhona nesizini ephezulu kakhulu okuyiKhisimusi, Iminyaka Emisha, Iminyaka Emisha YamaShayina nePhasika. Ubala ukuthi amanani bese enyuka ngo-10 kuye ku-25% ngaphezulu.
Izinto okufanele uzenze eCebu
Ngaphandle kokuheha kwayo kwemvelo, esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi, idolobha ngokwalo liyathandeka futhi singanikezela izinsuku ezimbalwa kulo. Umbhalo wobuKristu nowaseSpain ubonakala kuwo wonke amakhona ngamasonto, iziphambano namagama emigwaqo. Ingabe i- IMagellan's Cross, iBasilica Encane yaseSanto Niño, iSanctuary yeMagallanes neColón Street, isibonelo, endala kunazo zonke edolobheni.
Ungavakashela i- IFort San Pedro, iMetropolitan Cathedral, iThempeli laseTaoist laseCebu, iNdlu yamaJesuit, iCasa Gorordo endala nenhle kusukela ngekhulu le-XNUMX kanye nesiza esaziwa njenge Izihloko okuseBusay futhi akuyona nje into yokubuka enhle amakhilomitha ayi-12 ukusuka enkabeni yedolobha ngombono omuhle we-180º.
Ukuhambahamba edolobheni ungasebenzisa ibhayisikili elinamasondo amathathu elinamandla okugibela abagibeli abathathu. Amaphezo ayisikhombisa asePhilippines akhokhiswa ngekhilomitha. Kukhona futhi i-multitaxis ne jeepneys enemibala kakhulu. Akukho ukushoda kwamatekisi namabhasi akudala. Konke kukhokhwa ngemali yendawo, izindawo zokudlela ezinkulu kuphela namahhotela amukela amakhadi wesikweletu.
Kulungile manje Kuthiwani ngamabhishi aseCebu? Uma uzohlala izinsuku ezimbalwa inketho engcono kakhulu ukungasuki kude nenhlokodolobha. Phambi kwakhe kukhona i- Isiqhingi saseMactan, indawo enconyelwayo yokutshuza nobuhle bemvelo. Kuyaziwa nangokuthi Lapu Lapu y ixhunywe edolobheni ngamabhuloho amabili. Kuyisiqhingi esimatasa futhi yezindawo ezihamba phambili zokudilika emanzini esifundeni
Lapha eMactan kulapho izindawo zokungcebeleka zigxila khona futhi izivakashi ezenza uhambo lokuvakasha zisuka eManila noma eKorea noma eHong Kong ziza ngqo ngoba zinesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba. IMactan iyisiqhingi sama-coral esihle sokubalekela. Ezungezwe yimifula iTambuli neKontiki kanye neHilutungan Island Marine Sanctuary. Amabhishi nokudilika emanzini, ukuhamba ngezikebhe ze-snorkeling nokuhamba ngesikebhe yilokho okunikezayo.
Uma kukhulunywa ngendawo yokuhlala, kukhona konke kusuka kumahhotela wesabelomali kuya ezindaweni ezifanele ukuba kuhlu lokunethezeka lukaCondé Nast Traveler. Khumbula lokho IMactan ingaphansi kwehora ukusuka eCebu nemizuzu engama-45 ukusuka eManila akukho okunye. Ungafika ngezindiza eziqonde ngqo zomhlaba ezivela eNarita eJapan, Incheon eSouth Korea, eSingapore noma eHong Kong. Kepha ngaphandle kokuwela esiqhingini saseMactan kunamanye amabhishi anconyiwe kanti amanye akwezinye iziqhingi.
I-Las Iziqhingi zaseCamotes Kukhona ezine, iTulang, iPacjian, iPoro nePonson, futhi zonke zinamabhishi amahle namahhotela. Okufanayo kufana Isiqhingi saseBadian lapho kukhona indawo yangasese emangalisayo. Phakathi kwesiqhingi saseCebu neLa Leyte kukhona okuhle Isiqhingi saseBohol, futhi iyaziwa futhi inamabhishi amakhulu.
La Isiqhingi saseMalapascua, isiqhingi sabadobi, ingenye yezindawo eziphezulu futhi enye yemfihlo kakhulu yi Isiqhingi saseSumilon. Kowokuqala, ukutshuza ngedonga kuyinkosi ephelele, yize kungenzelwanga ezokuvakasha, mhlawumbe okunye okukhangayo. Awekho ama-ATM, amahhotela atholakala phakathi kwemigwaqo yabantu bendawo futhi ama-euro noma amadola awamukelwa.
IBantayan Kuyisiqhingi sase-Edene esinamanzi acwebezelayo namabhishi amhlophe. Inelinye lamasonto amadala kakhulu ePhilippines, amakhulu amane eminyaka futhi kunamahhotela nezindawo zokungcebeleka eziningi zalawo ongalahlekelwa izinyanga kuwo. Amanani? Kusuka ku- $ 60 kuya phezulu.
Njengoba ukwazi ukubona, ukunikezwa kule ngxenye yePhilippines kukhulu kakhulu kunokwaseBoracay. Lapha kufanele uzihlelele kangcono kakhulu ngoba isiqhingi ngasinye siyindawo. Bonke banamahhotela futhi bonke banikela ngokufana noma okuncane, kepha kimi kubonakala sengathi Uma uthanda ukubhukuda, ukuhamba nge-snorkeling nokudilika ePhilippines, indawo engcono kunazo zonke iCebu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » ICebu, enye inketho yezivakashi ePhilippines